Ngentwasahlobo nehlobo 2017: iinwele zamadoda | Amadoda aQinisekileyo
Njengakwilizwe lefashoni, ilizwe leenwele zamadoda nazo ziyavela. Vula lonke ixesha lonyaka sibona imikhwa emitsha.
Nangona sonke sinenwele ezilungele isitayile sethu, kuhlala kulungile. yazi ifashoni yomzuzu, kule meko yasentwasahlobo nasehlotyeni 2017.
1 Ezinye iinwele zalo nyaka
1.1 Uhlobo lwangaphantsi
1.2 Umgca wecala
1.5 Uhlobo lweHipster
Ezinye iinwele zalo nyaka
Ukuba kunjalo ukunyanzelisa ixesha elithile. Ukongeza entwasahlobo nasehlotyeni, inika umbono wokuba iinwele zisikwa phantsi ziya kuhlala ekwindla nasebusika.
Olu hlobo lokucheba iinwele akufuneki luchaphazele intloko yonke. Ingashiywa inde phakathi enweleni, kwaye ichetyiwe emacaleni. Kukho iindlela ezininzi kunye nokukhetha, ngaphakathi kwe "undercut".
Kule nwele, imigca iphawulwe kakuhle, iinwele zichazwe endaweni, kwaye kunokubakho nefuthe elimanzi, kusetyenziswa ijeli. Inkangeleko entsha, efanelekileyo kumaqondo obushushu aphezulu.
Umgca wecala unayo i-retro okanye i-nuance ye-vance, eyenza ilungele iminyhadala kunye nezinye izihlandlo ezikhethekileyo.
Ngenye yeenwele ezisetyenziswa kakhulu kule minyaka idlulileyo. Kwakhona lukhetho oluhle kakhulu. Ukuchukumisa okukhohlakeleyo, okufunwa ngamadoda amaninzi, kudityaniswa ngamanqanaba evolumu yolu hlobo.
Ukuze i-toupee ibonakale ilungile, iinwele kwi-nape kunye namacala ziya kufutshane kunaphezulu kwentloko. I-Wax, iminwe emanzi, ibrashi yebristle, kunye nesitshizi sokumisela sinokusebenza ngokumangalisayo.
Ukuba unxiba ii-bangs ngehlobo lasehlotyeni lalo nyaka, kufuneka libe kunye isitayile sangoku kunye nokusika kwale mihla, kugalelwe, iphawulwe, nangamacala asecaleni.
Yindlela ekhule kakhulu. Ngokwesiqhelo Inxalenye yeenwele ezinde, eziqokelelwe kwi-bun okanye kwi-ponytail.
Imithombo yemifanekiso: Bucmi / NdinguPepe Vela
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Isitayile esinenwele » Eyona ndlela ilungileyo yokucheba iinwele emadodeni
Iziqwenga ezintlanu zohlobo lweediliya kule hlobo
Izinto ezi-6 ezingenakulahleka kwikhabhathi yakho